Baaq xoog leh oo loogu talagalay adkeysiga dhammaan heerarka UNDP, Jamaica Style
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wakhtiga waarta » Baaq xoog leh oo loogu talagalay adkeysiga dhammaan heerarka UNDP, Jamaica Style
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Wasiirka Dalxiiska ee dalka Jamaica ayaa maanta khudbad ka jeediyay furitaanka xarunta hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan horumarinta ee UNDP.
Xubnaha waa rgentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad iyo Tobago, Uruguay, Venezuela.
Furitaanka Khudbadda Mudane Edmund Bartlett, Wasiirka Dalxiiska, ee Seminaarka Aasaaska UNDP/EU-LAC ee adkeysiga Maaliyadda iyo Joogteynta Ganacsatada Dalxiiska.
Dhisidda adkeysiga heerarka oo dhan waa lama huraan si loo hormariyo Ajendaha 2030 ee Horumar Waara.
Waxa kale oo ay si wax ku ool ah u maaraysaa ballanqaadyadayada caalamiga ah ee koritaanka iyo horumarka joogtada ah ee joogtada ah ee dhammaan tiirarka - dhaqaale, bulsho iyo deegaan.
Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica Edmund Bartlett ayaa yiri:
Sharaf bay u tahay Jamaica in ay iska kaashadaan la-hawlgalayaashayada EU-LAC Foundation iyo UNDP kalfadhigan saddexaad ee wareegga shanta dhacdo ee lagu raadinayo kobcinta wada-hadallada labada gobol iyo daneeyayaasha badan ee dalxiiska waara. Marka la eego xaaladda masiibada COVID-19, doodaha ku saabsan waaritaanka ayaa daruuri ka mid ah diiradda saaraya adkeysiga—dadka adkeysiga leh, bulshooyinka adkeysi leh, waaxaha adkeysi leh iyo dhaqaalaha adkeysiga leh.
Waa inaan ku daraa in adkeysiga iyo sii jiritaanku ay ahaayeen aasaaska ajendaha mudnaanta leh ee Dowladda Jamaica. Sababtaas awgeed, Xarunta u adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Qalalaasaha (GTRCMC) waxaa la aas aasay ka hor faafitaanka faafa, iyadoo la aqoonsanayo baahida loo qabo meel ku habboon oo lagu tixgaliyo waxna looga qabto carqaladaha halis gelin kara waddadeenna horumarka. Waxaan ogsoonahay in Professor Lloyd Waller, Agaasimaha Fulinta ee GTRCMC, lagu tiriyo ka qaybgalayaasha maanta, waxaanan hubaa in soo jeedintiisu ay la wadaagi doonto aragti dheeraad ah oo ku saabsan shaqada jidhkaas.
Diirada maanta ee adkeysiga maaliyadeed iyo joogtaynta ganacsatada, waxaanan doonayaa in aan carrabka ku adkeeyo shirkadaha dalxiiska ee yaryar, kuwa yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah (MSMTEs), waa shay muhiim ah oo ka dhex jira doodda ballaadhan ee ku saabsan xoojinta nidaamyada, hababka iyo dadka soo kabashada iyo koritaanka. Gaar ahaan sidaas, sababtoo ah MSMTE-yadu waxay aasaas u yihiin waaxda dalxiiska iyo, sida aan jecelnahay in aan niraahno waa laf-dhabarka dhaqaalaha Jamaican oo ka kooban in ka badan 425,000 shirkadood oo matalaya 90% qaybta gaarka ah.
Horraantii masiibada, dawladda Jamaica waxay aqoonsatay baahida loo qabo in la awoodo oo lagu taageero waaxdan nugul badbaadadooda iyo, kordhinta, badbaadada waaxda iyo dhaqaalaha. Tan waxaa ka mid ahaa in laga tanaasulo khidmadaha shatiga illaa J$47 milyan laga bilaabo Abriil 2020 ilaa Maarso 2022 iyo dhisidda qaab taageero oo adag oo dib-u-habeyn loogu sameeyo loogana soo kabsado saameynta dhaqaale ee COVID-19. Bixinta xirmooyinka adkeysiga, fududeynta deynta iyo deeqaha Wasaaradda Maaliyadda iyo Adeegga Dadweynaha ayaa ahaa waxyaabo kale oo muhiim ah oo lagu taageerayo MSMTE-yada. Intaa waxaa dheer, Dowladda Jamaica iyada oo loo marayo iskaashiga dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxay horumarisay E-ganacsiga E-ganacsiga Qaranka ee Bixinta (ENDS), app awood u siinaya sii wadida ganacsiga inta lagu jiro saacadaha bandowga COVID 19.
MSME-yada waxaa xaddiday xannibaadaha gelitaanka suuqa iyo xaddidnaanta helitaanka tignoolajiyada cusub. Intaa waxaa dheer, inta badan uma qalabaysan inay si wax ku ool ah uga jawaabaan carqaladaha ay ugu wacan tahay qulqulka ku filan, helitaanka maaliyadda iyo miisaanka oo xaddidan taasoo saameyn ku yeelatay jawaabta dowladda ee taageerada ganacsi. Iyadoo ay jiraan caqabadahaas, waxaa jira fursado la taaban karo oo loogu talagalay ganacsatada marka loo eego ganacsiga elektaroonigga ah, qaabeynta hawlahooda iyo horumarinta qorshayaasha sii wadida ganacsiga kuwaas oo si fiican u kobcinaya si ay u dhisaan adkeysigooda shoog dhaqameed iyo kuwa soo baxaya.
U adkaysiga hal-abuurka ganacsi iyo dhaqaale waxay u baahan tahay ganacsiyadu inay noqdaan kuwo firfircoon, hal-abuur leh, firfircoon iyo inay qaataan hab-dhaqanka isbeddelka iyo ficillada qaab waara. Debaaji aad u weyn oo adkeysi ah ayaa sidoo kale laga helaa dadka - xooggeena shaqada, gaar ahaan shaqaale xirfad leh oo caafimaad qaba. Si taas loo gaaro, sida ganacsiyadu u maalgashadaan nidaamkooda iyo kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kale waa inay maalgashadaan dadkooda.
Sida jasiirad yar oo soo koraysa, Jamaica waxay qadarinaysaa qiimaha sare ee iskaashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee horumarinta yoolalka horumarineed waara. Marka la eego, wada-hadallada noocan oo kale ah ayaa lagama maarmaan u ah in la oggolaado meel bannaan oo la isku dhaafsado aragtiyo laguna sahamiyo fursadaha iskaashiga joogtada ah si loo hubiyo in qofna aan laga tegin, heer deegaan, heer qaran ama heer caalami.
Waxaan rajeynayaa natiijada ka soo baxda kulammadan, waxaana ugu baaqayaa qabanqaabiyeyaasha iyo ka qaybgalayaasha inay ka gudbaan dukumeentiga natiijada caadiga ah ee mashaariicda wax ku oolka ah iyo ka qaybgalka danaha iyo faa'iidada wadaagga ah ee dadkeena.
Mike Morgan wuxuu leeyahay,
Nofeembar 18, 2021 at 20: 12
Ma u baahan tahay deyn degdeg ah oo dheer ama gaaban oo leh dulsaar yar oo hooseeya sida 3%? Waxaan bixinaa Amaah ganacsi, Amaah shaqsiyeed, Amaah guri, Amaah baabuur, Amaah arday, Amaah xoojinta deynta iwm. dhib malahan dhibcahaaga credit.
Amaahda Shakhsi ahaaneed (Ammaan iyo Ammaan la'aan)
Amaahda Ganacsiga (Ammaan iyo Ammaan la'aan)
Amaahda Isku-dhafka iyo qaar kale oo badan.
Nala soo xidhiidh si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan bixinta Amaahda waxaanu xallin doonaa kaaga
dhibaato dhaqaale. nagala soo xidhiidh email ahaan: [emailka waa la ilaaliyay]
Nambarka taleefanka: +917428831341 ( Wac/What's app)
اسل للتمويل wuxuu leeyahay,
Nofeembar 12, 2021 at 06: 03
dhaqaalaha essel wuxuu leeyahay,
Nofeembar 11, 2021 at 20: 03
Oktoobar 27, 2021 at 21: 49
مرحبا, أنا سعيد جدا الآن لأنني حصلت اليوم على مبلغ قرضي بقيمة 60.000 دولار من هذه الشركة الجيدة بعد أن حاولت عدة شركات أخرى ولكن دون جدوى هنا رأيت إعلان شركة Joan Maaliyadda وقررت تجربته واتبعت جميع التعليمات. وهنا أنا سعيد اليوم.[emailka waa la ilaaliyay]) أو whatsapp: +919144909366